NextMapping | Koorsada 2: Hogaanka isbedelka
Koorsada 2: Hogaanka isbedelka
Talaabooyinka Xiga oo Soo Socda
Tani waa koorsada labaad ee safarka lagu noqonayo Mustaqbalka Evolutionary ee Hogaamiyaha Diyaar u ah Shaqada.
Koorsadani waxay ka kooban tahay cutubyada 14 ee run ahaantii (r) macluumaadka koritaanka. Aasaaska koorsadani waxay ku saleysan tahay buugga ugu iibinta badan ee Cheryl Cran, "Farshaxanka Isbedelka Hogaaminta-Wadida Wadista ee Dunida Deg Deg Ah" (Wiley 2015).
Mawduucyada kuleylka ah ee buugga ayaa laga hadlay sida:
Ma waxaad tahay 'Maareeye Bedel' ama miyaad tahay 'Hoggaamiye Isbeddel'? Sidee baad ku garanaysaa?
Maxay ku kala duwan yihiin? Sideed isku dhafan tihiin labadaba? Waxaan bixinaa qiimeyn shaqsiyeed koorsada si aad u ogaato jihada aad ugu jeceshahay 'dhinaca' kadibna khabiirka caalamiga ah Cheryl Cran uu si faahfaahsan u sharaxayo kala duwanaanshaha, iyo sababta ay muhiim utahay in la ogaado natiijooyinkaaga, la fahmo iyo sida loo ka dhig isbeddelada lagama maarmaanka u ah in la beddelo si ay u noqdaan Hoggaamiye Isbadal oo tayo sare leh.
Waxaan sidoo kale diirada saareynaa:
Maskaxda Hogaamiyaha Isbedelka iyo xirfadaha badan ee looga baahan yahay Hogaamiyaha Isbedelka in si dhakhso leh loogu diyaariyo maxaa yeelay Mustaqbalka Shaqada ayaa Hada ah!
Aalad muhiim ah oo gaar ah oo ay diyaarisay Cheryl Cran oo loo adeegsaday adduunka- 'Wareegga Isbedelka' waa la wadaagayaa oo si faahfaahsan ayaa loo daboolay.
Cheryl waxay ku baraysaa istaraatiijiyadaha sida aad naftaada ugu dhaqaaqdid Wareegga Isbeddelka iyo sida aad ugu dhiirrigeliso oo aad dadka kale ugu horseedid Wareegga Isbeddelka. Macluumaad muhiim ah inaad ogaato oo aad fahanto, taas ayaa kaa hormarineysa kuwa kula tartamaya!
Hadafka hay'ad kasta iyo yoolkeena barnaamijkan waa:
Abuur dhaqan ah 'Hoggaamiyeyaasha Beddelka' kuwaas oo si togan oo firfircoon ugu diyaargaroobaya isbeddellada soo socda halkii ay ka jawaabi lahaayeen 'isbeddelka' ee lagu saarayo ururrada iyo dadkooda maalin walba taas oo keenta kalsooni darro iyo kalsooni darro, iyaga oo xannibaya horumarka dhammaan.
Dhamaadka barnaamijkan kaqeyb galayaasha waxay yeelan doonaan fikirka ah: 'Isbedel? ... Soo qaado!' IYO
Hayso xirfadaha aad ku caawiso dadka kale inay yeeshaan isku aragti.
Bal ka fikir suurtagalnimada waxaas oo dhan ururkaaga!
Barnaamijka 'Hogaanka isbedelka' wuxuu bixiyaa:
Istaraatijiyadaha sida 'kor loogu qaado Nidaamkaaga Nidaamkaaga Hoggaaminta (OS)'
Iyo sida loo dhiso xirfadaha isku dhafan ee lahaanshaha 'aragtiyo badan' xagga hoggaaminta iyo inbadan.
Waxa kale oo jira xooga la saarayo fahamka kala duwan sida:
Dhamaan aqoonta muhiimka u ah noqoshada Hogaamiye horumarineed oo loo diyaariyey Mustaqbalka Shaqada Hada!
Waa wax cusub oo aan caadi ahayn!
Faa'iidooyinka ayaa u diyaarin doona ururkaaga iyo kooxahaaga guulo aan horay loo arag.
Adiga oo la shaqeynaya tababarahaaga shakhsi ahaaneed waxaad uga wada hadli doontaan si qoto dheer sida aad u noqon karto Hogaamiye Isbedel wax ku ool ah hadda waxaadna awood u leedahay inaad ka wada hadasho duruufaha nolosha dhabta ah!
Sida dhamaan barnaamijyadeena oo dhan waxaa jira Waxyaabo Ficil ah oo ay ku shaqeeyaan, iyo xog-uruurin si loo dhameystiro safarka.
Barnaamijka Hogaaminta Isbedelka wuxuu ku dhammaanayaa Qorshe Nidaam Isbadal oo kaqeybgale kasta wuxuu buuxin doonaa Qorshaha Ficil Shakhsiyeed ee 90-Day ee ku saabsan sida loo hirgaliyo barashooyinka shaqadooda iyo goobta shaqada.